China Yakakurumbira yekufamba yakakwira simba 65W mhando c pd usb charger PD65W Kugadzira uye fekitori | Staba Electric
Yakakurumbira yekufambisa yakakwira simba 65W mhando c pd usb charger PD65W
1. Chidiki chidiki uye chakareruka pasi 65W GaN charger
4. Multi high power USB (A / C) zviteshi zvemafoni nhare
5.Kukwirira kwazvo kusvika 94%
*Kurumidza Kubhadhara Pd 65W Tsananguro Yemashoko
Dzazvino GaN Tekinoroji: inofambiswa neGaN tech, gan charger inova diki & inowedzera kubhadharisa hunyanzvi apa inogadzira kupisa kushoma. 65W pd gan charger ine simba rakaringana kubhadharisa zvizere yako 15.4 ”MacBook Pro mumaawa maviri chete.
Inotungamirwa naGaN tech, inojaja iri 30% diki pane mamwe majaja, akaomesesa kuperekedza iwe kwese kwaunoenda. Iyi compact 65W PD charger ine USB-simba kuendesa zvinoreva kukurumidza kuchaja kune ako USB-PD-inogoneswa michina. Iyi yekushanya-inoshamwaridza maviri USB madzirojaja inogadzirwa kununura ka5 simba remajaja akajairwa kune akawanda madhijitari panguva imwe chete. Inoratidzira shanduko dzichangoburwa mu-kumhanyisa-kumhanyisa tekinoroji, USB-C simba kuburitsa uye adaptive nekukurumidza kuchaja, iyi yega charger ndiyo yese yaunoda kuti usimbise zvigadzirwa zvako zvazvino uye ugare kumberi kwekakona kune chero remangwana remagetsi.
Ose mapoti anogona kuendesa yakakwira-voltage mutero kune zvese kubva kune mafoni uye mahwendefa kune ane simba-ane nzara USB-C malaptop senge 12-inch Macbook. Inotsigira nekukurumidza kuchaja kwe iPhone kubhadharisa iPhone 8 kana gare gare kubva zero kusvika 50% mumaminitsi makumi matatu netambo inosanganisirwa, uye mamwe mafoni / mapiritsi pakumhanya kwakanyanya. Zvakare mune smart IC chip - Iyo yepamusoro IC chip inozvionera yega uye inopa simba rakaringana rekuchaja rezvinhu zvakabatana.
Mudziyo wako unobhadharisa nekukurumidza sezvinobvira uchichengetedza hupenyu hwako hwebhatiri. (Inoenderana nezvose zviri zviviri PD & QC kuchaja). Premium uye Inotakurika - Iwo madoko akaedzwa kuti amire pamusoro pezviuru zvezviuru zvinoshandiswa uye charger yakagadziridzwa kuti irambe ichiramba ichiroja kwemaashoma e10,000 maawa, ichikupa iwe mhando yaunogona kuvimba nayo. Pd gan usb charger ine Akangwara magetsi kugovera, ichiwedzera kushanda kwekushanda kweimwe chete kana akawanda madhizaini. Iyo yakagadzirirwa kushanda neyechizvino chizvarwa chemakomputa uye smart zvishandiso, zvichibvumidza kuti ichinjwe zvekare plug kutungamira uye nekukurumidza kuchaja.
*Type C Pd Charger Runhare Chaja 65W Parameter
Divi: 53 * 53 * 30.5mm
Chaja ye 65W PD usb adapta inoshanduka kuita saizi diki asi inowedzera kugona kwekuchaja uye inoparadza kupisa kushoma
Superior Kuchengetedza Pd Runhare Chaja
Nekudzivirira kwakawanda, kudzora tembiricha, uye zvimwe, zvakawanda zvinodzivirira zvino chengetedza zvakakwana iwe nemidziyo yako
Inopindirana Flexible PD GaN Usb Charger
Mbiri-in-imwe yekuchaja mhinduro inokwanisa kutsigira ese USB C uye USBA zvishandiso senge iPhone 11 Pro 11 11 Pro 11 Pro Max XS XS Max XR X，nezvimwewo
Akangwara Simba Kugovera Pd Wall Chaja
Nouchenjeri inogovera 65W yesimba pakati pemidziyo mitatu painobhadharisa panguva imwe chete uye inotsigira kumhanya-mhanya kuchaja kusvika ku65W kana chishandiso chimwe chakabatana, smart charger charger
Pashure: Yekupedzisira chizvarwa inotakurika muti chengarava nhare mbozha charger PD100W
Zvadaro: Kupisa kureruka inokurumidza rusvingo yakasimba simba USB yemadziro adapteri 65W